विश्वकप क्रिकेट : आज इङ्ल्यान्डसँग भिड्दै पाकिस्तान ! « The News Nepal
विश्वकप क्रिकेट : आज इङ्ल्यान्डसँग भिड्दै पाकिस्तान !
काठमाडौं । अहिले नेपाल लगायत विश्वभरी नै विश्वकप क्रिकेटको रौनकता छाएको छ । यो वर्ष विश्वकपमा १० देशले सहभागिता जनाएका छन् । आजको खेल अन्तर्गत पाकिस्तानले घरेलु टोली इंग्ल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । ट्रेन्ट ब्रिजमा नेपाली समयअनुसार ३ बजेर १५ मिनेटमा पाकिस्तान र इंग्ल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी दिइएको छ ।
आजको खेलमा इंग्ल्यान्ड भने लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ । यसअघि इंग्ल्यान्डले उद्घाटन खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गरेको थियो । यता, पाकिस्तान भने पहिलो जितको खोजिमा हुनेछ । पाकिस्तानले आफ्नो पहिलो खेलमा वेष्ट इन्डिजसँग ७ विकेटले हार्नुपरेको थियो । खेलमा इंग्ल्यान्डको ब्याटिङ अब्बल देखिएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकालाई १०४ रनले पराजित गर्दा पनि इंग्ल्यान्डले ३११ रन बनाएको थियो । त्यसकारण इंग्ल्यान्डको राम्रो पक्ष भनेकै ब्याटिङ देखिएको छ । यता, पाकिस्तानको मामलामा भने ठीक विपरीत हुन्छ । पाकिस्तानको ब्याटिङ पहिलो खेललाई आधार मान्ने हो भने एकदमै कमजोर देखिएको छ ।
टस हारेर आफ्नो पहिलो खेलमा वेष्ट इन्डिजविरुद्ध मैदानमा उत्रिँदा पाकिस्तान १०५ रनमै अलआउट भएको थियो ।